အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနဲ့ ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို တရားအားထုတ်ရင်း ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူသွားတဲ့ အဘိုးတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် – Maythadin
အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနဲ့ ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို တရားအားထုတ်ရင်း ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူသွားတဲ့ အဘိုးတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
May Thadin | July 18, 2021 | News | No Comments
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကတော့ မြန်မာပြည်မှာအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေပြီး ပြည်သူတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှသေဆုံးသူတွေ များပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်
အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လပ်မှုတွေအပါအဝင် ဆေးကုသမှု မရတာတွေနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးနေကြရတဲ့ လူနာတွေမှာ ရောဂါရဲ့ဖိစီးမှုဒဏ်တွေကိုအလူးအလဲခံစားနေကြရတာပါ.
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာတဲ့ လူနာတွေလည်းရှိပေမယ့်သေဆုံးမှုတွေဟာများလွန်းတာကြောင့်သဂြိုလ်ဖို့တောင် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြရတဲ့အနေအထားပါ.
သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ ရောဂါအခံရှိသူတွေကူးစက်ခံရတဲ့အခါ စိုးရိမ်ရပြီး အခုတစ်ခါမှာလည်းရောဂါခံစားနေရတဲ့အဖိုးတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတရားအားထုတ်ရင်း ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူသွားခဲ့ပါတယ်
အဖိုးကတော့ ရောဂါဝေဒနာရဲ့ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုတွေကို အံတုရင်း သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘုရားတရားကိုအာရုံပြုကာတရားအားထုတ်ရင်း အေးချမ်းစွာအနားယူသွားတာကြောင့် လေးစားစရာကောင်းသလိုချီးကျူးသာဓုခေါ်စရာလည်းကောင်းလွန်းပါတယ်
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်း အဖိုးရဲ့ဗီဒီယိုင်လေးကို တင်ဆက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်.
ကိုဗစ္တတိယလွိုင္းကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာအေျခအေနေတြဆိုး႐ြားေနၿပီး ျပည္သူေတြမွာ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ေသဆုံးသူေတြမ်ားျပားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.
ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္မႈေတြအပါအဝင္ ေဆးကုသမႈ မရတာေတြနဲ႕ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆုံးေနၾကရတဲ့လူနာေတြမွာ ေရာဂါရဲ႕ဖိစီးမႈဒဏ္ေတြကို အလူးအလဲခံစားေနၾကရတာပါ.
ကိုဗစ္ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီး ျပန္ေကာင္းလာတဲ့လူနာေတြလည္းရွိေပမယ့္ ေသဆုံးမႈေတြဟာမ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ သၿဂိဳလ္ဖို႔ေတာင္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရတဲ့ အေနအထားပါ.
သက္ႀကီး႐ြယ္အိုနဲ႕ ေရာဂါအခံရွိသူေတြကူးစက္ခံရတဲ့အခါ စိုးရိမ္ရၿပီး အခုတစ္ခါမွာလည္း ေရာဂါခံစားေနရတဲ့အဖိုးတစ္ေယာက္ဟာသူ႕ရဲ႕ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာတရားအားထုတ္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အနားယူသြားခဲ့ပါတယ္.
အဖိုးကေတာ့ ေရာဂါေဝဒနာရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈေတြကိုအံတုရင္း သူ႕ရဲ႕ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာ ဘုရားတရားကိုအာ႐ုံျပဳကာ တရားအားထုတ္ရင္း ေအးခ်မ္းစြာအနားယူသြားတာေၾကာင့္ ေလးစားစရာေကာင္းသလိုခ်ီးက်ဴးသာဓုေခၚစရာလည္း ေကာင္းလြန္းပါတယ္.
ျပည္သူေတြအေနနဲ႕လက္ရွိအေျခအေနေတြမွာ က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကဖို႔တိုက္တြန္းရင္းအဖိုးရဲ႕ဗီဒီယိုင္ေလးကို တင္ဆက္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္.
နိုင်ငံတကာ အရုပ်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး အရုပ်မလေး